सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्री खनन र वेब डेटा स्क्रैपिंग उपकरण संग प्राप्त हुन्छ प्राप्त गर्नुहोस् जुन हाम्रो समय बचत हुनेछ - Semalt समीक्षा
वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू वेबसाइटहरूबाट सार्थक जानकारी संकलन गर्न डिजाइन गरिएको छ।. तिनीहरू Java, C ++, Python, Ruby, साथै अन्य प्रोग्रामिंग भाषाहरूमा आफ्नो प्रकार्यहरू प्रदर्शन गर्छन्. केहि वेब स्क्रैपिंग र सामग्री खनन सेवाहरू तपाइँ ठिकै सही र त्रुटि-रहित डेटा सेकेन्ड भित्र पस्ने पर्याप्त छन्।. केहि भन्दा अविश्वसनीय अनुप्रयोगहरू तल छलफल गरिएको छ:
1. स्क्रिन स्क्रैपर
यो नेटमा सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्री खनन उपकरणहरू मध्ये एक हो. पर्दा स्क्रैपर सटीक डेटा निष्कर्षण र नेविगेशन संग धेरै कार्यहरु लाई निवारण गर्दछ - buy pr backlinks. तपाईले मात्र यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईसँग पर्याप्त टोकनकरण वा प्रोग्रामिङ कुञ्जीहरू छन्. सफ्टवेयर सुरु गर्दै सादगी नै हो. तपाइँले भर्खरै डाउनलोड गर्न र यसलाई सक्रिय गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रोक्सी थप्नुहोस् र तपाईंको कार्य सूची रेकर्ड गर्न सुरु गर्नुहोस्. यो उपकरणले कोडको मद्दत र जाभास्क्रिप्ट र एचटीएमएलको साथ काम गर्दछ विभिन्न निष्कर्षण ढाँचाहरू सिर्जना गर्नेछ. स्क्रिन स्क्रैरको सबैभन्दा राम्रो विशेषता हो कि यो प्रयोग गर्न सजिलो छ र तपाईंको Citrix प्लेटफर्म सजिलैसँग परीक्षण गर्न सकिन्छ. मूलतया, यो सेवाले हामीलाई सरल स्क्रिप्टहरू लेख्न मद्दत गर्दछ र हामीलाई निकालेको जानकारी पाठ, एक्सेल, र CSV ढाँचामा डाउनलोड गर्न दिन्छ।.
2. आयात गर्नुहोस्. io
यो सबै भन्दा उपयोगी र अविश्वसनीय डाटा निष्कर्षण सेवा हो जसले हाम्रो समय बचत गर्नेछ।. आयात गर्नुहोस्. io एक व्यापक, निःशुल्क डेस्कटप अनुप्रयोग हो जुन असीमित संख्याका साइटहरू र ब्लगहरूको उपयोगी डेटा स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ. यो सेवाले हाम्रो वेब पृष्ठहरूलाई API हरू उत्पन्न गर्न सम्भावित डेटा स्रोतको रूपमा व्यवहार गर्दछ. यसरी, यसले हाम्रो समय बचत गर्छ र व्यापार र ठूलो उद्यमहरूको लागि उपयुक्त छ. आयात गर्नुहोस्. io तपाईंले पहिलेको प्रशोधन गरेको पृष्ठहरू प्रशोधन गर्दैन. आयात को एकमात्र नोकसान. io छ कि यो एक साइटबाट अर्कोमा नेभिगेट गर्न असमर्थ छ. यसको मतलब तपाईंले URL हरू हटाउनुपर्ने छ जुन तपाई म्यानुअल रूपमा डेटा निकाल्न चाहानुहुन्छ.
यो नविकरण गरिएको डेटा स्केपिंग सेवा हो. यूपाथले प्रयोगकर्ताहरूका लागि डाटा र खनन सामग्री स्क्रैप गर्न माहिर हुन्छन्. यो एक समयमा धेरै कार्यहरू गर्न सक्दछ र दुवै कोडर र गैर-कोडकहरूको लागि उपयुक्त छ. साथै, यो कार्यक्रममा महान पेज नेविगेसन सुविधाहरू छन् र तपाईंको पीडीएफ फाईलहरू स्क्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँलाई चाहानु पर्ने परिणामहरू प्राप्त गर्न र डेटा निकासीमा आफ्नो समय बचत गर्न सक्नुहुन्छ।. तपाईले विजार्ड खोल्न आवश्यक छ, तपाईले डेटा बाट स्क्रैप गर्न चाहानु भएको युआरएलको उल्लेख गर्नुहोस् र युपथले यसको प्रकार्य प्रदर्शन गर्न सुरु गर्नेछ. यो अनुप्रयोग सजिलै फ्लैश को माध्यम ले खुल्छ र तपाईं मिनेट को मामला भित्र पढ्न योग्य र स्केलेबल डेटा प्राप्त गर्दछ. तपाईंले स्वच्छ CSV र एक्सेल कागजातहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. एक प्रीमियम कार्यक्रम हुनु, यूपाथ स्टार्टअप को लागी उपयुक्त हुनेछ किनकि यो सानो pricey छ.
4. किमोनो ल्याब्स
किमोनो ल्याब प्रोग्रामरहरू, पत्रकारहरू, फ्रीलांसरहरू, वेबमास्टरहरू, उद्यमहरू, र गैर-प्रविधि व्यक्तिहरूको पहिलो छनौट हो।. यसले धेरै समय स्क्रैपिंग र सामाग्री खनन कार्यहरू एकै समयमा प्रदर्शन गर्दछ. यो उपकरण प्रत्यक्ष डेटा निष्कर्ष सुविधा, द्वारा संचालित गरिएको छ, जसले तपाईंलाई स्क्रैप गरिएको बेला डेटाको गुणस्तर हेर्न वा निगरानी गर्न दिन्छ. साथै, किमोनो ल्याब्स लगभग सबै वेब ब्राउजर र अपरेटिङ सिस्टमसँग मिल्दो छ. यसले कुनै पनि नेभिगेसन नेभिगेसन सुविधा प्रदान गर्दैन, र तपाईंलाई इच्छित ढाँचामा डाटा बाहिर लगाउनु अघि किमोनो ल्याब्सलाई प्रशिक्षित गर्न केही समय खर्च गर्नुपर्नेछ।.